बिहे गर्न चाहन्छन् अर्जुन र रणवीर, दिपिकालाई पर्ला त पिर ! « Mazzako Online
बिहे गर्न चाहन्छन् अर्जुन र रणवीर, दिपिकालाई पर्ला त पिर !
मज्जाको अनलाईन समाचार, भारत ।
अनस्क्रिन जोडीमा निकै रुचाइएको जोडी हुन् बलिउडका रणविर सिंह र अर्जुन कपुर । जसरी फिल्म गुण्डे मा यि दुई हिरोले एक अर्कालाई साथ दिएका थिए , त्यसरी नै यि हिरोहरु अब आएर रियल लाईफमा पनि नजिकैका साथी बनेका छन् । आजभोली यिनीहरु अक्सर पार्टीमा संगै रमाईरहेका हुन्छन् ।